China Wholesale 500V 690V 125A Cylindrical Fuse Holders fekitari uye vagadziri | Hawai
Vaya vane fuseuzi vatsigiri vefuses ine saizi inosvika 22X58mm. Ivo vanokwanisa kushanda pasi pekupisa kunokonzerwa neyakarongwa yazvino uye inotarisirwa ipfupi inokanganisa ikozvino kusvika ku100KA. Iyo inogona zvakare kushanda se fuse yekudambura switch ne multiphase mubatanidzwa. Pane mitsara miviri mukati / kunze paRT18N fuse base, ichipa simba rekucheka basa. Iyo RT18L mhando ine chengetedzo yekukiya kukiya iyo fuse inotakura kana yadimburwa kuti idzivise isiri kushanda; iyo inogona zvakare kuve yakashongedzwa nechinongedzo, chinoenderera mberi kana fuse zvinongedzo zvatyoka.
Yakarongwa Insulate voltage kusvika ku690V; Kushanda frequency 50Hz AC; Yakajairika yemahara yemhepo inopisa ikozvino kusvika ku125A: Inoenderana neGG13539.1. GB13539.2, GB13539.6. GB14048.3 uye IEC60269-1, IEC60269-2, IEC60269-2-1, IEC947-3.
Mushure mepurasitiki-Injected kesi yakarongedzwa neanofambidzana uye fuse zvinongedzo, mabhesheni anoumbwa nekutenderera kana kumisikidza ese ari maviri anokwanisa kuve multiphase yakarongedzwa. RT19 yakavhurika-dhizaini, uye mamwe akaomeswa akavanzika mamiriro. Kune mashanu fuse saizi inowanikwa yekusarudza kubva kune imwechete fuse base yeRT18N, RT18B, uye RT18C. Kune maviri maseti e-mukati-mitsara yeRT18N. Imwe yakaiswa nefuse zvinongedzo zveiyo saizi. Iyo imwe ndeye yakasarudzika yakavhurika kutaurirana neakaviri kutyora mapoinzi. Iyo yese base unit inogona kutema simba. RT18 mabheseni ese ari DIN njanji akaisirwa, pakati payo iyo RT18L yakagadzirirwa nechengetedzo yekuvharira pakurwisa zvisirizvo ope-ration mune iri kutyora nyika.
Pashure: Wholesale 1P 2P 3P 4P DC mini redunhu mabhureki mcb dc mudariki dc mcb solar
Zvadaro: Maindasitiri ekudzora IEC IP43 300A mhando c yekucheka ceramic fuse mubati
Industrial kudzora yakakwirira voltage Drop-kunze fiyuzi c ...
Industrial kuzvidzora IEC IP43 300A mhando c cutout ...